Idesika yoncedo ephakathi Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMeyi 5, 2007 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Ngaba ukhe uzibuze ukuba kwakunjani ukuba ngumhlobo wedesika yoncedo emva kumaxesha aphakathi? Ewe, umnxeba uphendulwe kwaye le vidiyo imnandi ngokuhlekisayo ibonisa ukuba inokuba yayinjani.
Ukuhamba ngeTim O'Reilly
tags: csruxhaso lwabathengiummeli wenkxaso yabathengiyenkxasoI-medieval
Ifom yoQhakamshelwano ngeWordPress ene-Spam Protection Version 2.0.0 Ikhutshiwe!
Inye into ebendingalindelanga ukuyibona kwibhlog yakho yayingumzobo waseNorway.
Lol & ube nempelaveki emnandi!
Meyi 5, 2007 kwi-1: 43 PM
Ubheja, foo! Kwahlekisa kakhulu ukuba ungabelani nabanye!